သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းများသည်သင်ထင်သလောက်တိကျမှုမရှိပါ Martech Zone
လူအများစုကကန့်သတ်ချက်တွေကိုမသိကြဘူး analytics နှင့်တိုင်းတာခြင်းအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်း ထူးခြားသော ဧည့်သည်များ။ ဤပလက်ဖောင်းအများစုသည် placing ည့်သည်ကိုတိုင်းတာ။ တိုင်းတာသည် cookie ကို, small ည့်သည်သည်တူညီသောဘရောင်ဇာကို အသုံးပြု၍ ဆိုက်သို့ပြန်သွားတိုင်းအချိန်တိုင်းရည်ညွှန်းသောဖိုင်သေးငယ်သည်။ ပြနာကသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုတူညီသောဘရောင်ဇာမှပြန်လည်မလည်ပတ်နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏ကွတ်ကီးများကိုဖျက်ပစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်၏ဆိုဒ်ကိုကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ လက်တော့နှင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကြည့်ပါကကျွန်ုပ်သည်ထူးခြားသော visitors ည့်သည် ၄ ​​ဦး ဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်၏ cookies များကိုအကြိမ်ကြိမ်ရှင်းလင်းပြီးသင်၏ site သို့ပြန်သွားပါကကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ထူးခြားသော visitors ည့်သည်များဖြစ်လာသည်။ MediaMind သည်ပြုပြင်ထားသောထူးခြားသော visit ည့်သည်ဟုခေါ်သည့်နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့သည်ဤဗီဒီယိုတွင်ရှင်းပြသည် - သင်၏ပရိသတ်စာရင်းဇယားအတွက်စီးပွားဖြစ်ညှိနှိုင်းမှု algorithm ကိုအသုံးပြုသည်။ သူတို့ကဒီမှာထူးခြားတဲ့ visitors ည့်သည်များ၏ Over- အစီရင်ခံရှင်းပြ:
ပြနာကမင်းရဲ့ပြisn'tနာမဟုတ်ဘူး analyticsသို့သော် ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသောအွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းများအားသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်သည်၊ ComScore ကွတ်ကီးများဖျက်ခြင်းကိုပိုမိုကြီးမားသောပြdelနာတစ်ခုအဖြစ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်။ comScore မှ cookies များကို သုံး၍ တိကျမှန်ကန်မှုကိုပစ်မှတ်ထားသည်။
၁ သရုပ်အတွက် ၇၀% (ဥပမာအမျိုးသမီး)
သရုပ်ပြ ၂ ခုအတွက် ၄၈% (ဥပမာ ၁၈-၃၄ နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးများ)
သရုပ်ပြ ၃ ခုအတွက် ၁၁% (ဥပမာ ၁၈-၃၄ နှစ်အရွယ်ကလေးများနှင့်အတူအမျိုးသမီးများ)
ဤသည်ကိုသင်၏ရှုတ်ချဖို့ရည်ရွယ်သည်မဟုတ် analytics သို့မဟုတ်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ပလက်ဖောင်း။ ၎င်းသည်ဤကဲ့သို့သောအစီရင်ခံခြင်းယန္တရားများအပေါ်သင်၏မှီခိုခြင်းကိုသတိပြုရန်သာဖြစ်သည်။ စျေးကွက်သမားများအတွက် third-party logins များနှင့်ပေါင်းစည်းမှုများပါ ၀ င်သော platform များသည်သင်၏ visitors ည့်သည်များအားကြားခံများနှင့်အစည်းအဝေးများသို့ပိုမိုတိကျစွာပစ်မှတ်ထားနိုင်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ သင်၏ or ည့်သည်ကို ၀ က်ဘ်၊ သင်၏မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်မျက်နှာပြင်တွင်မဆိုဝင်ရောက်ရန်လိုအပ်ပါကထို visitors ည့်သည်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာပစ်မှတ်ထားနိုင်ပြီးအမှန်တကယ်အရေအတွက်ကိုတိကျစွာဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ထူးခြားသော ဧည့်သည်များ။
သတင်းအချက်အလက်ခေတ်ရေစီးကြောင်းသည်သင်ဤမက်ထရစ်များကိုအသုံးပြုသည်နှင့်အမျှ ပို၍ အရေးကြီးသည်။ ကြားခံနယ်ပယ်များတွင်အမှားအယွင်းများသိသိသာသာပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏ထူးခြားသော visit ည့်သည်အရေအတွက်သည်အထက်သို့တက်နေလျှင်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသင်မှန်စွာလုပ်ဆောင်နေသည်။ သူတို့မရရှိလျှင်သင်လုပ်စရာအလုပ်တစ်ခုရှိကောင်းရှိမည်။
Tags: ချိန်ညှိထူးခြားတဲ့ or ည့်သည်ကလူဖြူဖြူကျော်သိန်းထူးခြားသော Vis ည့်သည်များtracking ည့်သည်ကိုခြေရာခံဧည့်သည်များ
23:2013 pm မှာအောက်တိုဘာ 9, 49
Doug ကိုမျှဝေသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဖတ်ရတာ အရမ်းကောင်းပြီး တွေးစရာပါ..!
ဇန်နဝါရီ 4, 2014 မှာ 5: 19 AM
nyfv မကြာသေးမီက ကျွန်ုပ်သည် ငွေသားအပေါ် အမှန်တကယ် ကျဆင်းခဲ့ပြီး အကြွေးများသည် ကျွန်ုပ်အား ထောင့်ပေါင်းစုံမှ စားသုံးနေပါသည်။ အဲဒါက အင်တာနက်မှာ ပိုက်ဆံရှာဖို့ သင်ယူပြီးတဲ့ အထိပါပဲ။ ကျွန်တော် surveymoneymaker point net ကိုသွားရောက်လေ့လာပြီး ငွေသားအတွက် စစ်တမ်းများကို စတင်ဖြည့်သွင်းခဲ့ပါတယ်၊ တကယ်လည်း၊ ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပိုပြီးတော့ ရနိုင်ပါပြီ!! ဒီလိုလုပ်လို့ ဝမ်းသာပါတယ်.. mKBu